EITI Madagasikara: nivoaka ny tatitra 2017 sy 2018 | NewsMada
EITI Madagasikara: nivoaka ny tatitra 2017 sy 2018
Nivoaka, omaly, ny tatitra toe-piasana 2017 sy ny 2018 ny rafitra Eiti Madagasikara, mikasika ny hetra sy ny tamberim-bidy nambaran’ny orinasa vaventy mpitrandraka harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara, ampitahana amin’ny voarain’ny fanjakana.
Miisa 19 ny orinasa nanao fanambarana ny taom-piasana 2017 ary nihena ho 16 ny taona 2018. Kely ny elanelan’ny tahan’ny nambaran’ny orinasa mitaha amin’ny vola voarain’ny fanjakana satria 0,28%, ny taona 2017, ary 1,36% ny taona 2018. Mitentina 159 miliara Ar ny hetra niditra tamin’ny fanjakana, ny taona 2017 ary nitombo ho 231 miliara Ar ny taona 2018.
Zava-baovao natao nanomboka tamin’ireo taom-piasana roa ireo ny fidiran’ny rafitra manara-maso ny fitantanam-bolam-panjakana (Cour des comptes). Maromaro ny fepetra takin’ny namolavola ity tatitra ity, toy ny tokony hampahafantaran’ny orinasa sy ny sampandraharaham-panjakana tsy ankiato ny antontam-baovao mikasika azy ireo. Tokony havondrona any amin’ny fitantanana foibe ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany koa ny tamberim-bidy, anjaran’ny CTD. Mila omena fiofanana ny CTD ahafahan’izy ireo mahay mitantana ny vola miditra aminy.
Nandray vola 140 tapitrisa Ar
Nanao ity tatitra ity ny kabinetra manokana, Ernst & young satria nametra-pialana ny tompon’andraikitra voalohan’ny Eiti, tamin’ny faramparan’ny taona 2018. Nohazavain’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ravokatra Fidiniavo, omaly, fa tsy mitombina velively ny filazan’ilay tompon’andraikitra voalohany (sekretera mpanatanteraka) ny Eiti Madagasikara, izay nametra-pialana fa tsy nisy ny hoenti-manana nahafahany niasa. Nomen’ny fanjakana 140 tapitrisa Ar ny Eiti ary voarain’ity tompon’andraikitra ity izany vola izany. Sambany nisy vola natokan’ny fanjakana tao anatin’ny tetibola ho an’ny Eiti.
Mitentina 2.243 miliara Ar ny harena an-kibon’ny tany naondrana tany ivelany, ny taona 2017, manome 25,12% miohatra amin’ny fitambaran’ny entana naondran’i Madagasikara tany ivelany, ary niakatra ho 2.793 miliara Ar, ny taona 2018 (27,6%). Nahatratra 4,1 miliara Ar ny tamberim-bidy (ristournes), anjaran’ny Vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (CTD), ny taona 2017 ary 67,4 miliara Ar ny 2018.